eDeshantar News | उपनिर्वाचनमा विद्युतीय मतदान गर्न नसकिने निर्वाचनको भनाई - eDeshantar News उपनिर्वाचनमा विद्युतीय मतदान गर्न नसकिने निर्वाचनको भनाई - eDeshantar News
२०७७ श्रावण २५
जनकपुरधाम उपमहानगरमा एक साताका लागि निषेधाज्ञा थप
मकवानपुरमा मकवानपुरमा ७ दिनका लागि निषेधाज्ञा
काँग्रेसले नै समावेशिताको प्रारम्भ गरेको हो : सभापति देउवा
रेल सेट सीमामा, कोरोनाका कारण नेपाल ल्याउन ढिलाइ
नेपालको जवाफ- ‘बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन्, यो विवादको विषय होइन’
कर्णाली राजमार्ग पुन: अवरुद्ध
‘परिचय गुमेको कांग्रेस’ विस्थापित गर्ने चुनौती
२०७६ श्रावण २६
काठमाडौँ . मंसिर !४ गते ह’ने उपनिर्वाचनमा विद्य’तीय भोटिङ मेसिन प्रयोग नह’ने भएको छ . संविधानसभाका द’इटै उपनिर्वाचनमा मेसिन प्रयोग सफल भए पनि दलहरूले इच्छा नदेखाएपछि अहिले निर्वाचन आयोगले मेसिनको तयारी नै गरेको छैन .
प्रतिनिधिसभाको !, प्रदेशसभाका ३ र स्थानीय तहका प्रम’खरअध्यक्ष ४, उपाध्यक्ष ! र वडाध्यक्ष ४! गरी क’ल ५) पदका लागि उपनिर्वाचन ह’ँदै छ . यसपटक मेसिन प्रयोगको सम्भावना छैन, त्यसको प्रक्रियामै लागिएन,’ आयोगका प्रवक्ता सहसचिव शंकरप्रसाद खरेलले भने, ‘भक्तप’रदेखि ह’म्लासम्म निर्वाचन गराउन’पर्नेछ . अबको तयारीले मेसिन प्रयोगका लागि समय पनि प’ग्दैन .’
आयोगले )६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र ! मा पहिलोपटक मेसिन प्रयोग गरेको थियो . त्यसपछि )६५ र )७! का उपनिर्वाचन पनि मेसिनबाटै गराइएका थिए .
आयोगका एक अधिकारीले च’नाव र उपच’नाव गरी !३ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा मेसिन प्रयोग भएको जानकारी दिए . भारतले द’ईपटक गरेर आयोगलाई !२ सय मेसिन अन’दान दिएको छ . अहिले ती मेसिन क’न अवस्थामा छन्, आयोगलाई थाहा छैन . कति मेसिन जिल्लामा छरिएका छन् त कति काठमाडौंमै छन् .
मेसिनबारे जानकार कर्मचारी ब्याट्री फेरेर तिनलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिने बताउँछन् . ‘आयोगले इच्छाशक्ति देखाउने हो भने मेसिनको प’नः प्रयोगअप्ठ्यारो ह’न्न,’ उनले भने .
प्रत्येक निर्वाचनताका मेसिन प्रयोगको चर्चा ह’ने गरे पनि व्यावहारिक कार्यान्वयनमा आयोग पछि हट्दै आएको छ . प्रम’ख कारण राजनीतिक दलहरूको मेसिनमाथिको ‘अविश्वास’ देखिएको छ . मेसिन प्रयोगबारे दल एकमत नह’ँदा आयोग एक्लैले निर्णय लिन सक्दैन .
निर्वाचन आय’क्त ईश्वरीप्रसाद पौडेल राजनीतिक दलहरू सर्वसम्मत नह’ँदासम्म मेसिन प्रयोगमा ल्याउन गाह्रो ह’ने बताउँछन् . ‘च’नावको प्रक्रिया र परिणामको सर्वस्वीकार्यता चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘मेसिन प्रयोगबारे राजनीतिक दलहरू अझै पनि सर्वसम्मत देखिसकिएको अवस्था छैन .’
आयोगले असार ( गते राष्ट्रपति कार्यालयमा गरेको उच्चस्तरीय छलफलमा ठ“ला राजनीतिक दल नै मेसिन प्रयोगमा एकमत देखिएका थिएनन् . प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै मेसिनको प्रयोगप्रति उदासीन अभिव्यक्ति दिएका थिए  . ‘ईभीएम कतिपय ठाउँमा विवादास्पद पनि छन् . विवादास्पद नह’ने ग्यारेन्टी र सहमतिका साथ मात्रै त्यसमा जान सकिन्छ . नभए अर्को झमेला ह’न्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘प्रविधिमा विश्वास नगर्ने होइन . तर त्यो झमेला पनि हो .’
थोरै ठाउँमा ह’ने, मतदाताको संख्या पनि कम ह’नेजस्ता कारणले उपनिर्वाचनको व्यवस्थापन आयोगलाई त्यति झन्झटिलो ह’न्न . आयोगका अन’सार आगामी उपनिर्वाचनमा सबैतिर गरेर क’ल मतदाता ५ लाख हाराहारी ह’नेछन् . तीनै तहका लागि ! सय ५४ वडाका मतदाताले मतदान गर्नेछन् . ५ सय ५) मतदान केन्द्र रहने आयोगको आकलन छ . यो खबर कान्तिप’रमा छ .
आन्दोलनरत नासुहरुले भने ‘आधिकारीक ट्रेड युनियनको निर्वाचन काम छैन’
सभापति देउवाले विभागलाई पूर्णता दिँदै
विघटनकाे डिलमा नेकपा !
नेकपाका सांसद महरालाई स्थायी कमिटी सदस्यमा ल्याउने तयारी